HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo ah kooxda ugu cad cad Saxiixa Cristiano Ronaldo.
April 12, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay ku soo baxday inay tahay kooxda ugu cadcad saxiixa weeraryahanka Manchester United Cristiano Ronaldo xagaagan.
37-sano jirkaan ayaa diiwaan gashtay 18 gool iyo seddex caawin 33 kulan oo uu saftay isagoo xiran maaliyadda Man United xilli ciyaareedkan, waxaana qandaraaskiisa Old Trafford uu ka harsan yahay 18 bilood oo kale oo uu ku sii jiri karo sanad dheeri ah.
Si kastaba ha ahaatee, madaxda Red Devils ayaa la filayaa inay doonayaan inay ka takhalusaan Ronaldo xagaagan ka dib markii xiddiga shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or la arkay isagoo gacantiisa ku tuuray taageereyaashii guuldarada ka soo gaartay Everton.
Sida laga soo xigtay El Nacional – via Goal – PSG ayaa hadda ku jirta kursiga si ay ula soo saxiixato Ronaldo, kaasoo laga yaabo inay ku soo jiidato Paris haddii tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane uu kala wareego Mauricio Pochettino .
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Portugal uu markii hore u furnaa inuu si cajiib ah ugu dhaqaaqo Barcelona , ​​laakiin ma doonayo inuu la shaqeeyo Xavi , sidaas darteed uu isbedel ku sameeyay inuu u wareego Camp Nou.
Ronaldo ayaa loo malaynayaa inuu ka fogaanayo ciqaabta Man United ka dib dhacdooyinkii ku saabsanaa telefoonka taageeraha ee Goodison Park, kaasoo uu tan iyo markaas raaligelin ka bixiyay.